Faritra Sofia : Nifampitana ny atleta sembana sy ireo salama vatana
Tsy misy fahasembanana ny fanatanjahantena.
Nanatanteraka fihaonana ara-panatanjahantena ireo olona manana fahasembanana tao amin’ny faritra Diana, ny 3 desambra lasa teo, daty nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ireo olona tra-pahasembanana. Ny kianja Chicago tao Soafeno Antsiranana no nampiantrano ny lalao, toy ny hazakazaka am-bisikileta kodiaran-telo sy ny seza mikorisa ary ny basket-ball sy ny ‘’bras de fer’’.
Isan’ireo atleta nisongadina i Dovique Sperien, izay mbola nanaporofo ny maha sangany azy amin’ny hazakazaka am-bisikileta kodiaran-telo sy ny ‘’fauteuil roulant’’.
Teo amin’ny taranja basket-ball amin’ny seza mikorisa dia nandresy ny Scouts ireo mpilalao sembana ara-batana avy ao amin’ny AMIS. Nanatrika ity lalao ity ny ekipa avy any Toliara, izay vao nandrobaka ny amboaran’ny tompon-dakan’ny Ranomasimbe Indianina farany teo.